Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada » Askari Ka Shaqeeya Xabsiga Qeybta Dumarka Oo Ka Sheekeeyay Qiso Aad Iyo Aad U Xanuun Badan,,
Askari Ka Shaqeeya Xabsiga Qeybta Dumarka Oo Ka Sheekeeyay Qiso Aad Iyo Aad U Xanuun Badan,,
Apr 28, 2016 - 1 Jawaab
Wuxuu yiri Askarigaan ka Shaqeeya Xabsiga, qeybta Dumarka isagoo Qisada ka Sheekeynaayo:- Waxaan dilnayvin ka badan 30 Dumar ah oo Qoorta Seef looga gooyay, mana eysan jirin mid ka mid ah kuwaas oo aan u Naxay, laakiin Maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa naloo keenay oo la soo qabtay Gabar, ka dibna Xabsiga aan ka taliyo lagu soo xiray.
Haddaba, maxey tahay sababta loo soo Xiray Gabadhaan? iyo Nolasheeda oo dhan, waxaa inooga Sheekeynaayo Askarigan, wuxuuna Hadalkiisa ku Bilaabay sidan:- Gabadhan yar waxey ku soo kortay, kuna soo Barbaartay Guriga Hooyadeed iyo Aabaheed laakiinse Labadeeda Waalid kuma Wanaagsaneyn Cibaadada Eebe, Xummi oo dhami wey Sameyn jireen.
Gabartan Gurigaas ayey ku soo kortay kuna soo Barbaartay oo Mugdiga iyo Dembiga u Saaxiibka ahaa, markey Qaan gaartay oo la joogay Xiligeeda Guurka ayaa waxey Raacday oo ay ku Dayatay Hooyadeed oo waxey Bilowday iney Ragga la tumato.
Haddaba, wuxuu Arinku sidaas ahaayaba muddo ka dib ayaa Habeen habeenada ka mid ah Gabadha iyo Wiilal ay Saaxiibo ahaayeen iyagoo Guriga dhex joogaan ayaa waxaa Dhacday inuu Wiil ka mid ah Wiilashii uu ku yiraahdo:- Naa Heblaayooy Caawa waxaan doonayaa inaa kaa Zineeysto. Gabadhii Xanaaq dartii ayaa Indhihii wada Casaaday ayaa waxey Qolka Aabaheed kala soo baxday Bistoolad uu lahaa Aabaheed, Durbadiiba kama shakin oo Madaxa ayey kala dhacday, wuuna Dhintay, Wiilashii kalena wey kala Carareen.
Gabadhii kaligeed ayaa ku soo Hartay, weyna Dhacday oo Shock ayey qaaday Naxdin Awgeed, weyna is Xukameyn weyday Dhiigga markey aragtay.
ka dib waxaa uvyimid Booliska weyna qabteen, waxaana lagu Xiray Xabsiga Qeybta Dumarka.
Gabar Askariyad ah oo Xabsiga joogtay ayaa waxey tiri markaan Gabadhaan geliyey Qol ay ku jireen Gabdho kale ayaa waxey isla markiiba Bilowday iney Fiiriso Hareeraheeda kolba Dhinac iyadoo la yaaban waxa ay Sameeynayaan Gabdhaha kale ee Xabsiga kula jiray (yacni waxey aragtay Gabdhihi kale oo Salaada Dukanaayo). ileen weligeed meysan arag Xarakaadkaas oo kale mid Madaxa Dhulka Dhigeyso (Sujuud) mid Rukuuceyso iyo mid Fadhida oo Ataxiyaatka Akhrineyso.
Wey la yaabtay weyna Cabsatay oo waxey is tiri Toloow ma Dumar Waalan baa lagu Dhex keenay, markaas ayey Qeylisay iyadoo u yeereyso Askariyadi, waxeyna ku tiri:- Waa maxay Dadkaan Waalan waxa ay sameynaayaan?
Askariyadii oo yaaban ayaa tiri:- Miyaadan Muslim aheyn Gabaryaheey?. Gabadhi ayaa tiri:- ا waan ahay Muslim, laakin waa maxay Dhaqdhaqaaqaan ay Sameynaayaan ?. Askariyadii ayaa tiri waxaad arkeeyso waa Salaadii ee Adiga ma Dukatid miyaa?. Gabadhii waxey tiri iyadoo Dhaaraneysa Walaahi waa markii iigu Horeeysay ee aan arko Xarakaadkaan, Salaadne wax la yiraahdo waligey ma maqalin.
Gabadhii Askariyada aheyd waxey tiri: waxaan Qolka ka soo saaray Gabadhii, waxaana u Bilaabay Aqrinta Quraanka iyo Baridda Salaada iyo Axkaamta Shareecada islaamka ilaa uu gaaray Qalbigeeda Diinta Macaankeeda, waxeyna noqotay Gabar toosan, waxeyna noqotay Gabar lagu daydo Akhlaaqdeeda.
Gabadhii Askariyada waxey tiri Gabadhan waxey Bilaawday iney Diinta iyo Dacwada ku dhex Faafiso Cabsiga Qeybihiisa kala duwan gaar ahaan Qeybta ay Dumarka ku Xirin yihiin. Askariyadan waxey tiri Gabadhaan yar markasto oo Dumar inoola keeno oo loo soo xiro dambi Xatooyo ama Zino ama Caasi Waalideeynimo iyo wixi la mid ah, waxey ula bixi jirtay dhinac markaas ayey Waanin jirtay oo ay Xasuusin jirtay Maalinta Qiyaame.
Gabadhan waxey Xabsiga ku sii dhex Noolatay muddo iyadoo Dacwadana halkeeda ka sii waday.
Gabar kale oo Askariyad ah oo Xabsiga ka Shaqeysa ayaa waxey tiri waxaan Habeen Daqdhexe u soo baxay inaa Fiir fiiriyo Maxaabiista si aan u Koontoroolo Xaaladooda marba Qol sidaan u Fiirinaayay oo u Wareegaayay Qolkasta iyo Dhinac kasta iyada oo ay Mugdi tahay ayaa waxaan arkay ayey tiri Nuur iyo iftiin ka baxaayo Qol ka mid ah Qololka Xabsiga, ka dibna Qolkii ayaan Furay markaan galay waaba Gabadhii oo Dukaneysa Qiyaamu leylka, kuna Dul Ooyeysa Salaadda dhexdeeda.
Haddaba, Maalmo dabadeed waxey Gabadhii u yeertay Askariga Dacwadeeda haayey waxeyna weydiisay in la gaaray Xilligii ku aadanaa Dilkeeda, iyadoo weliba ka Codsatay inaan waqtiga maamula dib loogu dhigin sinaba idinka haddii aad Rabtiin inaan idinla sii joogo, Aniga waxaan rabaa oo aan jeclaaday, la kulanka ilaahey oo waxaaba Sadax habeen oo isku Xikta Riyo leygu tusaayay Janada Dhexdeeda Booska aan kuleeyahay anigoo Hurdayo.
Askarigii wuxuu yiri Kolkeey intaas igu tiri:- waxaan u soo saaray Warqadii Qisaasta (dilka) ka dibna wey Degtay, weyna ku Faraxday, Qisaasti ayaana lagu Fuliyey iyadoo leh:-
ilaaheygii Abuuray Dadkoo idil, misne Dili doona Dhamaantod, haddana soo Nooleeyn doono Dhamaantood, waxaan kaa Baryaa inaad u Dembi Dhaafto Labadeyda Waalid iyo Dhalinyarti aan Xumanta iskula jirnay iyo Anigaba iyo Dhamaan Walaalaha Muslimiinta.
Guur Khaldan, Sheeko Gaaban Oo Aad Iyo Aad U Xiiso Badan Qalinkii Maxamed Muuse Sh Nuur..
Hal Jawaab : Askari Ka Shaqeeya Xabsiga Qeybta Dumarka Oo Ka Sheekeeyay Qiso Aad Iyo Aad U Xanuun Badan,,
Jazaakalaah khayran walalaha qaaliga ah ok oodacwada qiimahabadan nagusoobaraarugiyay